Amaphupho ngokugula – iAfrika
Asho ukuthini amaphupho ngokugula? Lokhu kuhlanganisa izingozi nokulimala, ukulunywa, ukukhubazeka ngokungaboni emehlweni, amadlebe avalekile, igazi nokopha, amathumba, ukuphefumula, amathambo aphukile, umkhuhlane, ukukhwehlela, ukukhubazeka, ukushawa yinzululwane, isifo, ubuhlungu endlebeni, izimilela, ukuphathwa yikhanda, uchoko, ukuhlanya, isimungumungwana, umuthi, ubuhlungu, ingxibongo, ubuhlungu emphinjeni kanye namanxeba.
Tags Ukudunguzela, Ukugula
Amaphupho asho isichitho noma isinyama
Uma ushawe ngesichitho kusho ukuthi kukhona osuke ekugadla engakufiseli okuhle ngoba phela isichitho siyisinyama, noma nje ngithi sihambelana naso. Uma ube nehlanhla ke namathongo akini ekubhekile uyakwazi ukuphupha okukuvezelayo ukuthi kukhona umuntu okuhambela sinyelela ongafuni ukukubona uphumelela. Kanti ke ukuphupha iphupho eliqondene naso isichitho akusiyo inhlanhla kuphela ngoba phela isichitho leso kuyenzeka sithunyelwe ngalo iphupho … Read more
Tags Isichitho, Isinyama
Uma uphupha ukuthi unesifo ngenjwayelo kusho ukuth
Uma uphupha ubona amathambo kusho ukuthi uzobhekana nezikhathi ezinzima kungekudala. Uma uphupha ukuthi uphuke amathambo, ngemvamisa kusho ukuthi kuzoba nezikhathi ezinzima ezizayo ekusaseni lakho. Uma kuwukuthi imilenze yakho ephukile, kusho ukuthi uzoshada nomuntu ongenawo amandla. Uma ungowesifazane kusho ukuthi umyeni wakho uzoba yivila nesidakwa esingakwazi ukukusekela. Uma ungowesilisa, kusho ukuthi unkosikazi wakho uzoba ngumuntu olungile, … Read more
Uma uphupha ukuthi unenxeba elijulile lapho ogwazwe noma osikwe khona kusho ukuthi uzoba nenhlanhla ebudlelwaneni bakho nabanye (uma usemusha) noma ebhizinisini lakho (uma usukhulakhulile). Uma inxeba lincane kodwa kusho ukuthi uzoba nebhadi maduzane.
Amaphupho ngomphimbo obuhlungu
Uma uphupha ukuthi unomphimbo obuhlungu kusho ukuthi uzoba nenhlanhla maduzane. Amaphupho ngomkhuhlane.
Uma uphupha ukuthi uphethwe yingxibongo kusho ukuthi uzoba yisigwili maduzane.
Uma uphupha uzwa ubuhlungu kakhulu kusho ukuthi kunezinto ezinhle ekusaseni lakho ikakhulukazi ngokwezimali. Uma uphupha uphuza umuthi. Amaphupho ngodokotela.
Uma uphupha uphuza umuthi kuwuphawu lwenhlanhla enkulu. Uma uphupha ngamakhambi kusho ukuthi umuntu omaziyo ogulayo uzoba ngcono maduzane. Kungasho nokuthi uzophumelela ekusaseni lakho. Ukuphupha ngamaphilisi nakho kuhle futhi kusho ukuthi uzophepha uma uhamba izwe. Amaphupho ngodokotela.
Uma uphupha ukuthi unesimungumungwana kusho ukuthi kuzoba nobunzima ekusaseni lakho. Kungenzeka ukuthi uzolahlekelwa yimali ngoba uyiboleka umuntu ongakwazi ukukukhokhela noma uzoba nezinkinga emsebenzini. Amaphupho ngobuhlungu endlebeni.
Amaphupho ngokulahlekelwa wumqondo
Uma uphupha ukuthi awuphilile kahle sengathi ingqondo ibuye ilahleke, lokho kusho ukuthi unenhlanhla futhi uzophila impilo ende nenothile. Uma omunye ephusheni lakho kunguye obukeka engaphilile ngokwasekhanda sengathi ulahlekelwa wumqondo, lokho kungasho ukuthi wena uzothola izindaba maduzane okungenzeka ukuthi zizokushaqisa. Amaphupho ngokukhubazeka.
Uma uphupha ukuthi uyaqhuga kusho ukuthi uzobhekana nezinkinga maduzane ikakhulukazi emsebenzini. Uma uphupha ukhushulelwa esikhundleni esiphezulu emsebenzini.
Uma uphupha ukuthi unochoko kusho ukuthi kunokuphatheka kabi namashwa ezayo kuwe.
Amaphupho ngokuphathwa yikhanda
Uma uphupha ukuthi uphethwe yikhanda kuyisixwayiso ukuthi uziqhelanise kubangani bakho okwesikhashana ukuze wazi ukuthi uwenza into elungile ngaphandle kokuhehwa yibo ukwenza iphutha. Amaphupho ngobuhlungu endlebeni. Amaphupho ngomkhuhlane.
Uma uphupha ukuthi isikhumba sakho sinesimilela uzoba yisigwili maduzane kodwa ngendlela ongayilindele nengakufanele. Uma uphupha ukuthi unethumba kuyinto enhle ngoba kusho ukuthi uzophila impilo emnandi.
Amaphupho ngobuhlungu endlebeni
Uma uphupha ukuthi unendlebe ebuhlungu kusho ukuthi amadlozi azama ukukutshela into kodwa wena awulalele. Amaphupho ngokungakwazi ukuphefumula. Amaphupho ngomkhuhlane.
Uma uphupha ukuthi ushawa yinzululwane kusho ukuthi uzama ukwenza okuningi ngesikhathi esisodwa. Kufanele wehlise uwenze into eyodwa ngesikhathi. Amaphupho ngomkhuhlane.
Uma uphupha ukuthi ukhubazekile noma awukwazi ukuzihambela kusho ukuthi uzoba nempumelelo ekusaseni lakho. Ukuze wenze kwenzeke kodwa kuzofanele ufunde ukubanakekela kakhulu kunamanje abanye abantu – ikakhulukazi uma bedinga usizo. Amaphupho ngokukhubazeka ngokungaboni emehlweni.
Uma uphupha ukuthi ukuthi uyakhwehlela kuwuphawu oluhle. Kusho ukuthi uzophumelela emsebenzini. Amaphupho ngomkhuhlane.
Uma uphupha ukuthi unomkhuhlane uzodinga ukuqaphela ngoba kunezitha ezilinde ukuthatha lelothuba ngesikhathi ungenawo amandla. Amaphupho ngobuhlungu endlebeni.